कलियुगका कुरा: भारतीयसँगको भेटपछि
Naresh Phuyal, Purushotam Bhattarai, Sunita Giri and 73 others like this.
Krishna Paudel प्रभू नै सबका घटमा टम्म !
Sudeep Silwal प्रभुको लिला अपरम्पार छ ।।
Yesterday at 7:53am via mobile ·
Binod Neupane यिन्का कार्य निती , रड निती र मुल अन्तर्बिरोद खुट्याउने - कहिलै भारत भन्दा बाहिर गएन । भारतले घुमाइ रयो, यी घुमी रहे । त्यो ब्रामन्ड छिचोल्ने बुद्दी देखिएन । अर्थात् मोउरी घुम्यो रसैलाई ? पो भन्छ भैरे । फन्फनि घुम्या घुमै हो ।
Jibnath Shiwakoti कोही नआत्तिए हुन्छ संसार परिवर्तनशील छ। यस्ता कुराहरु पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ।
Khagen M. Kerung Yakthungba कति बाराभ र प्रचन्न हरु मात्रै यस्तै हो भन्ठान्या होला??? पहिले गिरिजा बिपिहरु सबै त्यस्तै थिए, अहिले रामचन्द्रे, शुसिलदा, शेरे, माकुने, केपी, झल्लु र सबै मधेशी गुण्डा नेता, खाओबादी, ब्राकेट माओबादी, माईनस माओबादी सबै भारतिय हरुको नोकरहरु हुन। सबैभन्दा बढी भारतियको चाकडी र गु खान जानेहरु त तपाईहरुकै नेता नेपाली कांग्रेसकाहरु बढी छन, के अरु पार्टीलाई दोष दिनु??? पहिले आफ्नो पार्टीको नेताहरु स्वच्छ र देशभक्ती हुनु पर्यो नी अनि पो अर्का पार्टीलाई नानाभाती भन्न मिल्छ त! आफ्नो आंङमा भैसी नदेख्ने अर्काको आङमा भाईरस देख्ने त भए न नी पत्रकार महोदय हरु????????
Deb Raj Sharma naitikata hin neta baburam bhattrai,,
Dhruba Paudyal · 20 mutual friends
Even then results are deteriorating day by day. The data in Economic Survey reveal the maladies of the most crucial sectors.